Budata IP Webcam maka Windows
Budata IP Webcam
Free Budata maka Windows (2.50 MB)
Budata IP Webcam,
IP Webcam bụ ngwanrọ kamera na -enyere ndị ọrụ aka iji ekwentị gam akporo dị ka kamera weebụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị kamera weebụ ị ga -eji na kọmputa gị, ịnwere ike iji ngwaọrụ gam akporo gị dị ka kamera weebụ site na iji sọftụwia IP kamera. Ọbụlagodi na ị nwere kamera weebụ na kọmputa gị, IP Webcam na -enye gị ihe dị mkpa mere ị ga -eji họrọ ngwaọrụ gam akporo gị karịa kamera weebụ a; nihi na site na kamera IP ngwaọrụ gam akporo gị na -aghọ kamera ikuku. Enwere ike ijikọ ngwaọrụ gam akporo na kọmpụta notu netwọkụ WiFi, yana enwere ike ibugharị onyonyo na netwọk ikuku ọbụlagodi na enweghị njikọ ịntanetị.
Site na kamera IP, ị nwere ike iji onyonyo ị ga -enweta na ngwaọrụ gam akporo gị na ngwanrọ nkata vidiyo dị ka Skype. Na mgbakwunye, enwere ike ịgbaso onyonyo ahụ nụdị iyi mgbasa ozi site na ngwanrọ dịka VLC Media Player na ihe nchọgharị ịntanetị. Njirimara ikpeazụ a na -enyekwara IP kamera aka ịtụgharị ngwaọrụ gam akporo gị ka ọ bụrụ igwefoto nchekwa.
Iji gbanwee ngwaọrụ gam akporo gị ka ọ bụrụ kamera weebụ nke nwere kamera weebụ IP, ịkwesịrị ibudata ngwa IP Webcam na ngwaọrụ gam akporo gị wee jikọta ngwanrọ IP Webcam na kọmputa gị yana ngwa IP Webcam Android. Ị nwere ike iji njikọ a budata ngwa IP Webcam gam akporo gam akporo nefu:
IP Webcam Ụdịdị
Nha faịlụ: 2.50 MB
Mmepụta: Pavel Khlebovich